Miyuu soo dhammaaday xilli ciyaareedkii difaaca Chelsea ee Antonio Rudiger kaddib markii uu ku dhaawacmay kulankii Man United? – Gool FM
(London) 30 Abriil 2019. Waxaa la soo warinayaa in xilli ciyaareedkii difaaca kooxda Chelsea ee Antonio Rudiger uu soo dhammaaday.
Antonio Rudiger ayaa ka maqnaan doona inta ka dhiman xilli ciyaareedkan kooxdiisa Chelsea kaddib dhaawac ka soo gaaray jilibka.
Difaaca reer Jarmal ayaa la rumeysan yahay inuu qalliin dhanka jilibka ah ku mari doono dalka Talyaaniga, kaddib markii uu ku dhaawacmay kulankii Axaddii ee Premier League kaasoo dhex maray kooxaha Man United iyo Chelsea kuna dhammaaday barbaro 1-1.
Rudiger ayaa cidleeyey kooxda Chelsea xilli ay aad ugu baahnayd, maadaama Blues ay tartan adag ugu jirto sidii ay ugu dhammaaysan lahayd afarta sare ee horyaalka Premier League oo ay xilli ciyaareedka dambe uga soo muuqan lahayd Champions League, sidoo kalena ay ciyaareyso tartanka Europa League.
Laakiin Blues waa inay noolaadaan la’aan difaacooda dhexe ee Rudiger, iyadoo maqnaanshihiisa ay u badan tahay inuu daboolo Andreas Christensen.